Iiplagi ezingama-7 zasimahla zokugqibezela ifoto yethu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iiplagi ezingama-7 zasimahla zokugqibezela ifoto yethu
UJose Angel | | Imifanekiso, Izibonelelo
Ngaphandle kokhuphiswano olukhulu olufunyenwe sisibuko seAdobe, esona sixhobo sisetyenzisiweyo iseFotohop. Ingcali engaphezulu kunye nabasebenzisi abatsha bajikela kweyona nkqubo inegama ngabo bonke. Oku kungenxa yemali yeevidiyo kunye nezifundo ezikhoyo phaya, ukuqala ngokukhuphela inkqubo kwiiplagi zangaphandle. Oko kwenza ukuba kubekho inkqubo yokhuphiswano ngakumbi kulo naluphi na uqeqesho kuyilo.
Kwaye nangona Photoshop sisixhobo esinamandla amakhulu Uyilo, kukho iiplagi ezizalisayo. Kwaye ezinye zezi zixhobo ziya kukunika izixhobo ezinjengemifanekiso, ukwenziwa, njl. Ezi zinto zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo. Kwaye iiplagi zinikezela ngendlela ekhawulezayo yokwandisa ifotohop ukugcina ixesha. Yeyiphi indlela ebhetele kunokwenza ngezi plugins zasimahla zilandelayo.
2 Inki okanye i-Ink
3 Ukuqokelelwa kweNik
4 Umfoti oqinisekileyo
7 Iziphumo ze-ON1 10.5
Bonke abayili bafuna isitokhwe semifanekisoKutheni usilinganisela? Ezi plugins Getty Images Ijonge wena kwaye icoca imifanekiso oyifunayo. Ukongeza, esi sicelo asisebenzi kwiFotohop kuphela, ungasisebenzisa kwi-Illustrator nakwi-InDesign. Nje ukuba yonke iprojekthi yakho yenziwe kwaye ilungele ukufumana imvume yabathengi sinokufumana iphepha mvume lesisombululo esiphakamileyo. Ngale ndlela siya kuyigcina imifanekiso yethu ukuze sihambe kakuhle.
Inki okanye i-Ink
Njengabaqambi sicinga ukuba wonke umntu othumela umsebenzi uya kuqonda ngokugqibeleleyo. Ke, ukuba sisebenzela umphuhlisi, siyakholelwa ukuba bayayiqonda iprojekthi yethu kwaye iya kugqibela njengoko sifuna. Kodwa siyalibala ukuba abaphuhlisi akufuneki bawuqonde umsebenzi wethu. Njengathi, asiqondi ukuba ikhula njani. Ukusilela kwe-spec ngamanye amaxesha kukhokelela kwiziphumo ezingachanekanga zangaphambili kwaye ayihambi njengoko bekulindelwe. I-inki iyancedisana ekunceda ukuba ubonelele ngolwazi olongezelelekileyo malunga ne-mockups zakho ngokubhala maleko akho, ukusuka kubuchwephesha ukuya kwiziphumo kunye nobukhulu beemilo.
Iiplagi ezininzi zabafoti zifakiwe kwingqokelela yeNikKungenxa yoko le nto ikule TOP. Kodwa ngakumbi okoko kufunyenwe uGoogle. okoko ngaphambili ibingayi kulunga kweli nqaku indleko yeedola ezingama-95. Namhlanje, enkosi kwinkampani kaGoogle, isimahla. Into enomdla kukuba, isigebenga sokukhangela sivumile ukuhambisa ingqokelela kwi-DxO ukuqinisekisa ukukhula okuqhubekayo.. I-URL entsha yokukhuphela iya kuba hokshineneyindu.com kodwa kusenokwenzeka ukuba ungene google.com/nikcollection ngeli xesha.
Ukuba uyilo ngokungxama, okanye awuqinisekanga ukuba usebenzisa i-Photoshop ukwenza imifanekiso enesitayile, UmFoto wasePhoto yindlela ekhawulezayo nesebenzayo yokufumana inkangeleko ephucukileyo ngesantya esipheleleyo. Izinketho ezilula zokucofa kunye nokuya phambili zithetha ukuba uya kuwutshintsha ngokukhawuleza umsebenzi wobugcisa, nangona oku kuluncedo ngakumbi kubaqalayo beFotohop kunabasebenzisi abanamava.
Iphepha le-quintessential icon inokongezwa kweAdobe. Sele siyazi ukuba basebenza kunye nefoto kunye nemontage giant Freepik, ke oovimba abazukusilela. I-FlatIcon sisiseko sedatha esikhulu samawaka weevektri onokuzikhuphela kwifomathi ye-SVG, ye-PSD, okanye ye-PNG. Iplagi yasimahla yeFotohop ikuvumela ukuba ufumane ngokukhawuleza zonke ii-icon ngaphandle kokushiya imeko yakho yomsebenzi, uzifake ngqo kuyilo lwakho kwipaneli.
Ngokusebenza kuyo yonke ipakethe ye-Creative Suite, le iplagi Shutterstock ibonelela ngokufikelela ngokuthe ngqo ukusuka kwisicelo ukuya kuluhlu olubanzi lwemifanekiso ekhoyo kwilayibrari yeShutterstock. Khangela ngaphakathi kweFotohop, cofa ukukhetha kunye nokufaka, kunye nelayisensi ngokuthe ngqo ngokuhamba lula komsebenzi. Kuyanceda kakhulu ukuba sisebenzisa imifanekiso yasimahla yoyilo lwethu.
Iziphumo ze-ON1 10.5
Le yenye imeko yendlela Isicelo siba simahla emva kwexabiso elihle kakhulu. iliso! Asithethi ngokufaneleka, kodwa ukusuka kwi-60 ukuya kwi-zero yinguqu ebalulekileyo. Isixhobo esiluncedo sokufumana isiphumo esikhawulezileyo kumfanekiso. Yiba unyango lombala, ukongeza ukuthungwa kunye nengxolo, okanye imiphetho yokuyila.
Zininzi ezinye, kodwa uninzi lwazo zinendleko, ezinokuthi ziqale ukusuka kwi-15 ukuya kwi-200 euros. Okwangoku, unezimbalwa onokukhetha kuzo simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iiplagi ezingama-7 zasimahla zokugqibezela ifoto yethu
UDamian Martin G sitsho
Molo, kutheni isithi iqoqo le-NIK lisimahla ukuba luvavanyo lweentsuku ezingama-30 kuphela?
Phendula uDamian Martin G
Iimpawu ezi-5 ezisindisiweyo kutshintsho